အားကစားလက်အိတ်များသည်အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်လေးခုရှိသည်။ လက်ချွေးများတွင်လေ့ကျင့်နေစဉ်ကိရိယာများကိုကိုင်ထားပါ။ ၂. လက်ဖြင့်ကာကွယ်မှု။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးလက်များအတွက်လက်ဖြင့်စာမရေးပါ။ ၃ ။ ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ်ခံပညာကိုလေ့လာပါ။ လက်အိတ်ဝတ်လျှင်သင်ပိုမိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ ၄ ။ ကြံ့ခိုင်ရေးလက်အိတ်ယခုဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်လာကြပါပြီ။
လုပ်ဆောင်ချက် - ကျောရိုးနာကျင်မှုကိုသက်သာစေခြင်း၊
စျေးကွက်တွင်ကြံ့ခိုင်ရေးလက်အိတ်များစွာရှိပြီး၊ မတူညီသောကြံ့ခိုင်မှုအားအသုံးပြုခြင်းသည်မတူညီသောကြံ့ခိုင်မှုလက်အိတ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ မြင့်မားသောပြင်းထန်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်အခါသင်ကဲ့သို့သောကြံ့ခိုင်သည့်လက်အိတ်များသုံးရန်လိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်လေးလံသည့်စည်တီးရန်တွန်းအားပေးခြင်း၊ သင်သာမန်ကြံ့ခိုင်သောလက်အိတ်ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည် ၁ လအတွင်း၌ပင်ဟောင်းနွမ်းသွားလိမ့်မည်။ သင်သည် dumbbells ကဲ့သို့သောပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပါကသင့်လက်ဖဝါးပေါ်တွင်သားရေပါသည့်ကြံ့ခိုင်သည့်လက်အိတ်၊ လက်၏နောက်ဖက်ရှိအထည်များနှင့်ပတ်ပတ်လည်လက်ကောက်ဝတ်များကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျဆွဲ -ups, ကိုယ်ခံပညာနှင့်အခြားအားကစားလုပ်ချင်လျှင်, တောက်ပအရောင်, အသက်ရှုနိုင်သောကြံ့ခိုင်ရေးလက်အိတ်ကိုသာရွေးချယ်ပါ။
အသက်ရှူနိုင်သောပစ္စည်းများအသုံးပြုပါလက်အိတ်များပူနေသောအပူကိုရှောင်ရှားရန်မျက်နှာပြင်ပစ္စည်းသည်များသောအားဖြင့်အသက်ရှူရှိုက်နိုင်ပြီးအ ၀ တ်လျှော်တတ်သည်။ လှေကားထစ်များသည်အထည်ကိုဆွဲဆန့်နိုင်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့်လေဒဏ်ခံကိုအဆင့်မြင့်လက်အိတ်များနှင့်အထူးရည်ရွယ်သည့်လက်အိတ်များတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ အဓိကကိုယ်ထည်နှင့်မပုတ်နိုင်သောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုလက်၏လက်ဆစ်အစိတ်အပိုင်းများတွင်အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပြီး၎င်းကိုအများအားဖြင့်မိုက်ခရိုဖိုင်ဘာ ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ဆိုင်ကယ် - ၎င်းမှာစက်ဘီးလက်အိတ်ကဲ့သို့ရွေးချယ်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးလည်ပတ်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်၊ လက်အရွယ်အစားအတွက်သင့်လျော်သည်၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောသားရေလက်အိတ်များသို့မဟုတ်သင့်လက်၏နောက်ဘက်ရှိကာဗွန်ဖိုင်ဘာပစ္စည်းများပါသောလက်အိတ်များကိုရွေးချယ်သည်။
နှင်းလျှောစီးခြင်း - နှင်းလျှောစီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်နှင်းလျှောတိုင်များပေါ်တွင်မူတည်သည်၊ ထို့ကြောင့်လက်အိတ်အတွက်လိုအပ်ချက်များသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ပူနွေး။ အအေးခံရန်သာမကနူးညံ့။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နှင်းလျှောစီးလက်အိတ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သားရေနှင့်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်မခံနိုင်သောအထည်များကိုရွေးချယ်သင့်သည်။ နှင်းလျှောစီးနေစဉ်သင့်လက်၌နှင်းများမတော်တဆမှုတ်သောအခါ၎င်းသည်ရေထဲသို့လွယ်ကူစွာအရည်ပျော်သွားပြီးလက်အိတ်ထဲသို့ထိုးဝင်သောကြောင့်လက်အိတ်၏အပြင်ဘက်အစိုင်သည်ရေစိုခံရမည်။ နှင်းလျှောစီးနေစဉ်၊ နှင်းလျှောစီးပစ္စည်းကိရိယာများကိုအမြဲချိန်ညှိရမည်၊ ထို့ကြောင့်နှင်းလျှော ၀ လက်လက်များကိုကျယ်ပြန့်စွာထားသင့်ပြီးလွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုအတွက်လက်ချောင်းငါးချောင်းနှင့်ခွဲထားသင့်သည်။ လက်အိတ်၏လက်ကောက်ဝတ်သည်ကြာကြာ။ cuff ကိုဖုံးအုပ်ထားနိုင်လျှင်၊ လက်ကောက်ဝတ်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ elastic band တံဆိပျတစျခုရှိလြှငျ၎င်းငျးသညျဆီးနှုနျးမြားကိုထိထိရောက်ရောက်တားဆီးနိုငျသညျ နွေးထွေးစွာကာကွယ်ရန်နှင့်ဝါဂွမ်းခင်းထားခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နှင်းလျောစီးသမားများသည်လက်ချောင်းငါးချောင်းနှင့်လက်နှစ်ချောင်းအကြားရွေးချယ်နိုင်သည်၊ ယခုတွင်လက်ချောင်းသုံးချောင်းရှိသောလက်အိတ်များသည်စကိတ်သမားများနှင့်ရေပန်းစားသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ပိုစုံတွဲတစ်တွဲကိုပြင်ဆင်ပါ၊ ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပါသည်။ သင်၏လက်များကိုမခံနိုင်ပါ။ ချွေးသည်လက်အိတ်များကိုစိုစေလိမ့်မည်။
အပြင်ဘက်တွင် - ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများတွင်မြည်းရိုင်းဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့်တောင်တက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင်အဆင်သင့်ပြင်ပလက်အိတ်တစ်စုံသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ လာမည့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရာသီဥတုအေး။ လက်၏နွေးထွေးမှုနှင့်နှစ်သိမ့်မှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏သက်တောင့်သက်သာကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ hibernate မလုပ်သောမြည်းများသည်ရေစိုခံ။ အသက်ရှူနိုင်သောလက်အိတ်တစ်စုံ၊ အားကောင်းသောဆံပင်ချုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လက်ချောင်းများနှင့်အလွန်နွေးထွေးသောလက်အိတ်လိုအပ်သည်။
The အန္တရာယ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်လက်အိတ်မဝတ်ဘဲစီးနင်း?
စီးနင်းပြီးနောက်သင်၏လက်၌ထုံခြင်း၊ သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်သည်ဆိုပါကသင်သည်သင်၏လက်ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းမှခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။ စက်ဘီးစီးချိန်တွင်သာမန်အားကစားဒဏ်ရာများကိုအသိအမှတ်ပြုပါ။ တကယ်တော့, နေသမျှကာလပတ်လုံးလှုပ်ရှားမှုညှိနှိုင်းမှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ဒဏ်ရာများမှဝေးနေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်စက်ဘီးလက်အိတ်အကြောင်းပြောဆိုရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ စီးနင်းသောလက်အိတ်များသည်စက်ဘီးစီးသူများအတွက်အထူးလက်အိတ်ဖြစ်သည်။ မတူညီသောစက်ဘီးအမျိုးအစားများအရ၎င်းတို့ကိုတောင်ကြီးတောင်ငယ်လက်အိတ်များ၊ လမ်းဘေးဆိုင်ကယ်လက်အိတ်များနှင့်ကုန်းဆင်းလက်အိတ်များအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အချို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှအစွန်းရောက်အားကစားအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလက်အိတ်များသည်ကိုယ်ကာယလုံခြုံမှုနှင့်စီးနင်းသက်တောင့်သက်သာရှိစေရန်လိုအပ်သည်။ ရာသီအလိုက်ရာသီအရလက်ချောင်းတစ်ဝက်၊ စွန်ပလွံပင်များကိုထူကြသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတည်နေရာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုအရ, စွန်ပလွံ pad များအတွက်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများလည်းကွဲပြားခြားနားသည်။ ဥပမာ၊ စက်ဘီးစီးရန်အတွက်စွန်ပလွံပင်များသည်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်လက်အိတ်များထက်သိသိသာသာပါးလွှာသည်။
အကယ်၍ သင်၏လက်ကိုင်များသည်ပြားချပ်ချပ်ကိုင်တွယ်သူများဖြစ်ပါကပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်အိတ်များမရှိလျှင်ဖိအားသည်အဓိကလက်မ၊ လက်ညှိုး၊ လက်ချောင်း၊ လက်ချောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ပျမ်းမျှအာရုံကြောသို့တိုက်ရိုက်ပို့သည်။ လက်ကောက်ဝတ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း syndrome ရောဂါခေါ်။ ပျှမ်းမျှအာရုံကြောကိုကြာရှည်စွာဖိအားပေးခြင်းကလက်နှင့်လက်ချောင်း၊ လက်ညှိုးနှင့်အလယ်လက်ချောင်းများ၊ ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုပခုံးနှင့်တံတောင်ဆစ်ထိခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သည်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်လက်အိတ်သည်သင်ကားထဲသို့ကျသောအခါအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီးနေနှင့်အအေးဒဏ်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ သေးငယ်တဲ့လက်အိတ်ကိုလျှော့မတွက်ပါနဲ့ ဤအပိုင်းအတွက်ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းသည်လက်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအရကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်လက်၏နောက်ကျောကိုလေဝင်လေထွက်၊ ချွေးစုပ်ယူမှု၊ နေကာကွယ်မှုနှင့်အအေးကာကွယ်မှုစသည့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အစိတ်အပိုင်းများသည် shockproof၊ skid-anti-and wear-tahan ဖြစ်သောလုပ်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအလေးထားသည်။ ထောက်ထားစာနာခြင်းနှင့်စေ့စေ့နားထောင်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနေစဉ်လက်အိတ်များကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်ချွေး၊ စလစ်၊ စိုစွတ်သော၊ ရှင်သန်နိုင်သော၊ ဒဏ်ခံနိုင်မှုကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီးစွန်ပလွံနှင့်လက်ကောက်ဝတ်များကိုကာကွယ်ပေးသည်။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်သည်အမြန်နှုန်းလှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွင်ရှိပါကမြင်းစီးသူရဲ၏ထိန်းချုပ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လက်ပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်မတော်တဆဖြစ်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်မှုဒဏ်မှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မြင်းစီးသူရဲသည်အပန်းဖြေစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောထိုင်ခုံကိုယ်ထည်နှင့်ချုပ်ကိုင်ထားမှုကြောင့်၎င်းသည်လက်ကောက်ဝတ်အဆစ်ကိုပုံမှန်မဟုတ်သောတင်းမာမှုအခြေအနေတွင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှလက်ကောက်ဝတ်အာရုံကြောချုံ့ခြင်းလက္ခဏာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လက်အိတ်စီးရခြင်း၏အထူးလုပ်ဆောင်ချက်မှာလက်ကောက်ဝတ်အပေါ်ဖိအားကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလက်အိတ်၏စွန်ပလွံ၏ shock shock စုပ်ယူမှုသည်စီးနင်းနေစဉ်ကိုင်တွယ်မှု၏အင်အားကိုထိထိရောက်ရောက်သက်သာစေပြီးစွန်ပလွံများပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးလက်ဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်စက်ဘီးစီးသူများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအချက်များတိုးပွားစေနိုင်သည်။